मेयरज्यू ! बाटो कहिले बन्छ ? « Drishti News – Nepalese News Portal
१४ आश्विन २०७८, बिहिबार 12:20 pm
नगरप्रमुख गैरे अबेरसम्म नआएपछि वडा नं ६ का वडाध्यक्ष नरबहादुर खत्री र ३ का वीरजङ्ग भण्डारीलगायतसँग स्थानीयवासीले आक्रोश पोखे । जनताको मतबाट चुनिएका नगरप्रमुखले स्थानीयवासीको समस्यालाई अनदेखा गर्न नमिल्ने आवाज उठ्यो ।
स्थानीय नौबीसे टोलका महिलाले सडक स्तरवृद्धि नहुँदा वर्षात्मा हिलो र हिउँदमा धुलो सहनुपर्दाको पीडा सुनाए । विरोधको नेतृत्व गरिरहेका युवाहरु र जनप्रतिनिधिबीच केहीबेर सवालजवाफ नै चल्यो । यातायात सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना भएपछि प्रहरी पनि त्यहाँ आइपुग्यो ।
प्रहरीले सडक बन्द गर्नु कानुनविपरीत हुने जनाउँदै अवरोध खोल्न कोसिस ग¥यो । युवाहरुले मानेनन् । नगरप्रमुख आएर सडक बनाउने प्रतिबद्धता नगरुञ्जेलसम्म विरोध जारी राख्ने अड्डी कसे । अन्ततः नगरप्रमुख गैरेले स्थानीयवासीको विरोधलाई छल्न सकेनन् । उनी आएपछि जनप्रतिनिधि, ठेकेदार र स्थानीयवासीबीच छलफल भएपछि वातावरण केही सङ्लियो । उक्त सडक यथाशीघ्र ममर्त, सुधार र दशैँपछि स्तरोन्नति नै गर्ने प्रतिबद्धता आएपछि स्थानीयवासी सडकको अवरोध हटाउन तयार भए ।
ठेकेदार कम्पनीले विसं २०७८ कात्तिकभित्रमा काम सक्ने गरी रु २४ करोड ७८ लाख ८४ हजारमा सो सडक बनाउने जिम्मा पाएको थियो । निर्माण कम्पनीले सडक स्तरोन्नतिको कामलाई गति नदिए पुनः विरोधमा उत्रने स्थानीयवासीले बताएका छन् । रासस